मैले पढ्ने समाचारको हेडलाइन फेरिएको छ | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला.. लकडाउन कथा
मैले पढ्ने समाचारको हेडलाइन फेरिएको छ
३ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०९:१४
म दोलखाको रेडियो शैलुङ्गमा समाचार पढ्छु । पहिला प्रायःजसो नेताका सहमति, गुट-उपगुट, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका प्रतिबद्धता जस्ता कुरा मैले पढ्ने न्युजका हेडलाइन हुन्थे । अहिले न्युजका हेडलाइन फेरिएका छन् । कोरोनाको महमारीले देशलाई आक्रान्त पारेको छ । एक, दुई गर्दै कोरोना लागेका मानिस बढ्दै गएको समाचार रेडियोमा महत्वका साथ पढ्नुपर्छ ।
यससँगै मानिसले भोग्नुपरेका अभाव र पीडाका समाचार पनि पढ्छु । लकडाउनले गर्दा जन्मथलो फर्किन नपाएका, कैयौँ कि.मि पैदल हिँडेर घर फर्केका/फर्किंदै गरेका मानिसका पीडा, लकडाउनले गर्दा दुःख पाएका गर्भवती/सुत्केरी महिलाका वेदना, नेपालको सिमानामा आइपुगेर पनि नेपाल पस्न नपाएका मानिसका पीडा र कामका लागि विदेश गएका युवाका कहालीलाग्दा समस्या अहिले मैले पढ्ने न्युजका हेडलाइन बनेका छन् । किसानले उत्पादन गरेका फलफूल, तरकारी तथा माछामासु बेच्न नपाएको पीडा अनि दूध बिक्री नभएर सडकमा पोखेको समाचार पढ्दा धेरै नरमाइलो लाग्छ । तर विडम्बना हामी केही गर्न सक्दैनौँ । हामी सञ्चारकर्मीलाई दिक्क लाग्ने कुरा यही हो । हामीसँग मानिसले कति ढुक्क भएर आफ्नो समस्या पोख्छन् तर हामी उनीहरूको पीडालाई समाचार र हेडलाइन बनाउनबाहेक केही गर्न सक्दैनौं ।
अर्को मनले यसरी मध्यस्तकर्ता बनिदिने पनि त कोही हुनुपर्छ र हामी त्यही गर्दैछौँ भन्छ । दबाब दिन निरन्तर आवाज उठाइदिन त हामीले सहयोग गरिरहेकै छौं नि । त्यसैले होला हामीलाई आवाजविहीनहरूको आवाज भनिएको । अनि केही सहयोगी मानिसले पीडामा छट्पटाइरहेकाहरूलाई सहयोग गरेको समाचार वाचन गर्दा मन प्रफुल्लित हुन्छ ।
अरूको पीडाको हेडलाइन पढ्दा-पढ्दा कुन बेला मनमा आफ्नै पीडाको समाचार कसले भनिदेला भनेर तर्कना आउँछ । म पनि कहाँ आफ्नो घरमा आफ्नो पूरै परिवारसँग छु र यो सङ्कटको बेला । धन्न भाइ लकडाउनले गर्दा काठमाडौं जान पाएको छैन र मलाई साथी भएको छ । नत्र म पागल हुन्थें होला ।
मलाई पनि घरमा आमाबाबासँग समय बिताउन मन छ । विपत्‌मा घरको न्यास्रो अलि बढी नै हुँदो रैछ । घरबाट बाबाआमाको फोन आउँछ केही बेर कुरा गर्छु । अनि उही सधैंको कुरा दोहो¥याउनुहुन्छ ‘सबै जना शहरबाट गाउँ आएका छन् तिमीहरू घर कहिले आउँछौ ?’
हाम्रो काम पनि त महत्वपूर्ण छ । ‘यसपालि हाम्रो जिम्मेवारी अलि बढी छ त्यसैले बिदा लिन मिल्दैन’ भनेर छोराछोरी आउने बाटो कुरिरहेकी आमाको मन थमथमाउने कोसिस गर्छु तर पनि आमा न हो केही बेर माने जसो गर्नुहुन्छ, भोलिपल्ट फोनमा उही गुनासो गर्नुहुन्छ । ‘छोरीको न्यास्रो लागे एफएम बटार्नु, अनि सम्झिनु छोरी अगाडि बसेर फत्फताई रहेकी छ, सुरक्षित छ अहिलेसम्म’ भनेर हँसाइदिन्छु चिन्ताले आँसु मात्र झार्न नसकेको आमाको मनलाई ।
२०७२ साल वैशाख १२ र २९ गतेको भुइँचालोका बेलामा त घर बसिएन । अब के डराउनु । त्यो समय अझै याद छ मलाई खुला ठाउँमा स्टेसन बनाएर पनि समाचार प्रसार गरेको । त्यसैले त त्यति बेलाको विपत्‌मा स्थानीय रेडियोहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेले भनेर धेरैले सराहना गरे ।
कहिलेकाहीं छुट्टी मिल्यो भने हिँडेरै पनि घर जान्छु । चरिकोटबाट केही किमि मात्र टाढा छ मेरा गाउँ जिलु । बुबा त अरू बेला पनि हिंडेरै तरकारी बेच्न जिरी आइपुग्नुहुन्छ । हामी पनि कहिलेकाहीं हिंड्दा केही हुँदैन जस्तो लाग्छ । अनि हिड्छौँ बिहानै पुलिसको आँखा छलेर ।
हुन त हामी सञ्चारकर्मी पनि अहिले पहिलो घेरामा बसेर काम गर्नेहरूमा पर्छौं । तर हाम्रो अवस्था भने गएगुज्रेको छ । हामीलाई पनि डर त लागिहाल्छ नि । काठमाडौंतिर त कुनकुन एफएमले हो घरबाटै कार्यक्रम चलाउन सुरु गरे भन्ने सुनेको छु तर यहाँ त्यस्तो सम्भव छैन । रेडियो स्टेसन जान करै लाग्छ । धन्न मैले रिपोर्टिङ गर्न फिल्ड जानुपर्दैन । रेडियो स्टेसन कोठा नजिकै छ । बाहिर गएर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अथवा अफिस टाढा हुनेहरूलाई कति गाह्रो होला । म काठमाडौंका सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई सम्झिन्छु । केही चिनेजानेको हालखबर सोधिरहन्छु । अनि राम्रोसँग काम गर्नु, पहिला आफ्नो सुरक्षा गर्नु अनि बल्ल अरू कुरा गर्नु भन्छु ।
केही साथीहरू त हाम्रो भाग्यमा त्यस्तो कहाँ र पनि भन्छन् । हुन पनि हो पिपीईको त कुरा परै जाओस् मास्क र स्यानिटाइजरका लागि पनि मरिहत्ते गर्नुपर्छ हामी सञ्चारकर्मीले । न साहूले बुझ्छ न सरकारले । केही ठूला मिडिया हाउसहरूले बेतलबी बिदा बस भनेर धेरै सञ्चारकर्मीहरूलाई भने रे भन्ने पनि सुनेको छु । धन्न हामी जिल्लाकै भए पनि त्यो स्थिति आइसकेको छैन अहिलेसम्म ।
अहिले रेडियोमा ड्युटी पालैपालो गरेर छ । एक जना प्राविधिक र एक जना कार्यक्रम चलाउने मात्र जान पाउँछ । त्यसले गर्दा केही राहत भएको छ भन्नुपर्‍यो । पहिला-पहिला हामी गाउँ-गाउँबाट वृद्धवृद्धा, युवा, अधबैंस सबैलाई बोलाएर दोहोरी कार्यक्रम गर्थ्यौं स्टुडियोमै । श्रोताले सबैभन्दा धेरै मन पराउने कार्यक्रम थियो त्यो। तर अहिले त्यसरी उनीहरूलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्न सकिँदैन । तर पनि कोरोनाको समाचारले श्रोतालाई दिक्क लागिसक्यो होला भनेर एक-दुई जनालाई बोलाएर भजन कार्यक्रम गर्छौं । यसो गर्दा एक अर्काबाट टाढा बस्छौँ, सुरक्षाका उपाय अपनाउँछौँ ।
हामीले दिने समाचारले, हेडलाइनले श्रोतालाई दिक्क बनाउँछ भनेर हामी ख्याल गर्छौँ । तर पनि राजनीतिक नेतृत्वमा हुनेहरू हामीलाई हौस्याउने, उत्साह थप्ने समाचार र हेडलाइनभन्दा पनि निराशा र दिक्क लाग्ने समाचार र हेडलाइन पढ्न बाध्य तुल्याउँछन् । कस्तो दया माया भन्ने कुरा नभएको होला जस्तो लाग्छ । अझ सञ्चारकर्मी/पत्रकारहरू आफ्नो स्वास्थ्यको परवाह नगरी मान्छेका समस्या, पीडा ल्याउन लागिपरेका छन् । सरकार उसैलाई आफ्नो प्रतिपक्ष देख्छ । जहिले पनि ठुँगुला जस्तो गरेर बसिरहेको हुन्छ । यो देख्दा विरक्त लाग्छ । हुन त स्वास्थ्यकर्मीको उत्साह त नथप्नेहरूले पत्रकारको उत्साह त झन् के थप्थे । पत्रकार जहिले पनि उनीहरूका तारो नै त हो भनेर चित्त बुझाउँछु ।
धेरै देशहरूमा पत्रकारहरूलाई कोरोना लागेको छ भनेर कहिलेकाहीं डर लाग्छ । हाम्रो देशका सञ्चारकर्मी/पत्रकार साथीहरू सुरक्षित रहुन् अब छिट्टै हामीले पढ्ने समाचारका हेडलाइन सकारात्मक बनुन् ।
परदेशीको को छ र ?
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १०:०६
लकडाउनमा कुशको पुरोहित
१६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०९:१३
मेरो स्थगित भएको एसईईको रुटिन कहिले निस्केला ?
२ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०७:१७
Total Visits: 18,710